ABOSLUTE Thunder nlaghachie SOFTWARE n'oge a! Site Anthony Park
Ya mere, m mgbe kemgbe otu dee a nyochaa, dị ka mgbe, ọbụna na ọtụtụ puku ihe na m na zụtara on amazon na m na hụrụ n'anya, m bụ nnọọ mgbe onye dee a nyochaa. Ee, ụfọdụ n'ime unu nwere ike na-akpọ m Come ma ọ bụ umengwụ maka na ọ daghị azụ ebe reviews bụ ihe na-eme ka ọkụ eletrik nyochawa ịzụta. Ko, m na nwere ọtụtụ oge ebe m na furu efu Foto ndị dị na m iPhone na / ma ọ bụ kọmputa na nnọọ were ya iwe. M nyochara n'ebe nile ịchọta ihe ngwọta na N'ezie Wondershare si Dr. Fone maka IOS (Mac) bụ ihe mbụ na m hụrụ mgbe m malitere nnyocha. M bụ ukwuu obi abụọ na mbụ, ma ọ bịara na-azọpụta m chọrọ ịlụ na m ndụ. Anyị bụ ndị a obere n'elu mmanya na-egbu m ga-asị akpa ọchị, na otu onye ihe dugara ọzọ na ihe osise nile dị na fim na anyị filmed e-arahụ, na m na-ekwu funari. Ọ dịghị ebe na foto ahịhịa na anyị ọbụna jikọtara ya na kọmputa na zọpụta ndị foto na vidiyo n'ebe ahụ. Ọfọn m maa, adịghị agwa m chọrọ ịlụ akpa ọchị, bụ na ọ na mmadụ na mberede na-adịgide adịgide ehichapụ anyị dị ebube foto na vidiyo. Ma na Dr.Fone maka IOS na Wondershare Data Recovery (ọzọ na-azọpụta ndụ Mmemme) nke m ga-ukwuu nwere ike ikwu. Unu ada maka ndị ọzọ ala-efu software sị ha ga-eme otu ihe ahụ na ndị ọzọ, n'ihi na m n'onwe m gbalịrị ya. Daalụ Wondershare Data Recovery & Dr. Fone maka iOS (Mac)
Magburu onwe! Site Raimunda
egwu site manojcasey
Ya mere, ebe bụ a nzaghachi i nwere ike ịgụ na. My Iphone wee banye mgbake mode na ee m natara 90 percent mgbake na-arụ ọrụ na-agbalị iji nweta 100 percent site T Lost Data si IPhone akpata
Chukwu Daalụ! Adịkwa gị ụfọdụ kasị oké egwu akwụkwọ bụ akwara erughị ala. Ma ekele Wondershare n'adịghị ndị ọzọ ... abụ nnọọ anya! M mmepụta ihe tọgharịa ozugbo mgbe m malitere Wondershare free nzọ ụkwụ. M akwụkwọ m gosiri elu! Gbalịa mee ihe ndị free nzọ ụkwụ na ị gaghị akwa ụta gị zụọ. M ọṅụ na N'ezie ka na-agbalị iji weghachite fọdụrụ. Jisie ike!
Ofu m iPhone 5! Site Jack
M na adịkarịghị dee reviews maka ngwaahịa. Mgbe agbali ọhụrụ ios nweta nkwalite m iPhone 5, ekwentị wee banye a na friji mode na iTunes sịrị na m mkpa iji naghachi ekwentị nke ga-ewepụ niile m na-azoputaghi eserese (700+ photos), wdg m hụrụ Dr.Fone maka ios site a apple ụka saịtị. Ọ na-arụ ọrụ! M enweghị echiche otú ọ mere ya, ma Dr.Fone nweghachi na-azọpụta m ekwentị. Kpam kpam ruru ego! Ekele Dr.Fone!
Ekwentị na arụ ọrụ site michelle
M chere na ekwentị m e bibiri !! Ọzọkwa !! Dọkịta otu wee m anya .. anya legit .. NA UGBU A na-arụ ọrụ !!! AHHH Hallelujah! hahaha
ekele sooo muth site anas
! site Erin J. Ọ n'ezie na-arụ ọrụ, na-amaghị otú, ma ọ na-eme. Mmadụ na mberede weghachiri eweghachi na-ekwesịghị ịdị ndabere ka m iPhone mgbe upgrading iOS. -Ekele Chineke maka Dr. Fone, n'ihi na m na-enwe ike naghachi m niile photos ahụ e ehichapụ site na-ezighị ezi ndabere.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (Mac) Review site Abraham Aranda
iphone 4s site Zee
M na-agbalị a na ngwa na ọ na-arụ ọrụ-enweghị ntụpọ, na bụ uru na-azụ ahịa. achọtara m ihe m na-achọ na dị nnọọ nkeji.
Magburu onwe site José VASQUEZ
Ihe dị oké weghachite ọmụma site na ekwentị ma ọ bụ nanị ndabere SITE ngwa